प्रि-सिजनको मैत्रीपूर्ण खेलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले जिरोनामाथि सहज जित:: Naya Nepal
प्रि-सिजनको मैत्रीपूर्ण खेलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले जिरोनामाथि सहज जित
Published on: September 27, 2020
प्रि(सिजनको मैत्रीपूर्ण खेलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले जिरोनामाथि सहज जित निकालेको छ । गएराति भएको खेलमा बार्सिलोनाले जिरोनामाथि ३(१ गोलको सहज जित निकालेको हो ।
र्बासिलोनालाई सहज जित दिलाउनको लागि कप्तान लियोनल मेस्सी र फिलिप्पे काउटिन्हो नायक बने ।जोन क्रुफ स्टेडियममा भएको खेलमा बार्सिलोनाको जितका लागि मेस्सीले दुई गोल गरे । त्यस्तै काउटिन्होले एक गोल र एक असिस्ट गरेका थिए । जिरोनाका लागि सामुएल साइजले एक गोल फर्काएका थिए ।
पहिलो रोजाईमा अनुभवी खेलाडी उतारेको बार्सिलोनाले खेलको सुरुवातदेखि नै बल पोसेसनमा पकड जमाउँदै जिरोनाविरुद्ध आक्रमण बुनेको थियो । खेलको २१ औं मिनेटमा बार्सिलोनाले अग्रता बनाएको थियो । ब्रानिलियन प्लेमेकर काउटिन्होले फ्रान्सिस्को ट्रिनकाओको पासमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए ।
पहिलो हाफमा अन्तिम मिनेटमा कप्तान मेस्सीले गोल गरे । उनले काउटिन्होको पासमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई पहिलो हाफमा २(० को अग्रता दिलाएका थिए ।
दोस्रो हाफ सुरु भएको पहिलो मिनेटमा नै जिरोनाले गोल अन्तर घटाएको थियो । ४६ औं मिनेटमा जिरोनाका मिडफिल्डर सामुएलले गोल गर्दै खेल २(१ को स्थितिमा ल्याएका थिए । तर, ५१ औं मिनेटमा मेस्सीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । उनले सर्जी रोबर्टोको पासमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई ३(१ गोलको सहज जित दिलाएका थिए ।
प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले ६० औं मिनेटमा ९ खेलाडी परिवर्तन गर्दै युवा टोलीलाई मैदान उतारे । पछिल्लो टोलीले गोल निकाल्न नसकेपनि प्रदर्शनको तुलनामा भने सुधार ल्यायो । आक्रमणमा थप गति र शक्ति देखिएको युवा टोलीले लगातार अवसर भने सिर्जना गरेको थियो ।
ईन्डियन र चेन्नई सुपर किंग्सबीचको उद्धघाटनसँगै १३ औँ संस्करणको आइपीएल सुरु
कोरोना कहालीकैबीच चर्चित ईन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलको १३ औँ संस्करण शनिबारबाट यूएईमा सुरु भएको छ । तर, हरेक संस्करणमा क्रिकेटप्रेमीको ध्यान तान्न सफल आइपीएलले यसपटक भने फरक स्वाद दिएको छ ।
अथार्त महामारीकै बीच सुरु भएको यो सिजनमा कोरोनाले धेरै बदलाव ल्याइदिएको छ । विश्वका अधिंकाश मुलुकलाई अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले जकडिरहेको छ । तर, यो महामारीकै कारण हुने नहुने दुविधामा रहेको भारतको चर्चित क्रिकेट लिग आइपीएल अन्ततः यूएईमा सुरु भएको छ ।
साविक विजेता मुम्बई ईन्डियन्स र चेन्नई सुपर किंग्सबीचको उद्धघाटनसँगै १३ औँ संस्करणको आइपीएल सुरु भएको हो । तर, कोरोनाले नै यसपटक आइपीएलमा धैरै बदलाव ल्याईदिएको छ ।
आइपीएल चलिरहँदा रंगशालामा दर्शकको उपस्थिती थाप्नै नसकिने गरी हुन्थ्यो । तर, पहिलो पटक यो प्रतियोगिता बिना दर्शक ‘बायो सेक्योर’ माहोलमा सुरु भएको छ । अर्थात १३औँ संस्करणले रंगशाला नै पुगेर हेर्ने दर्शकको साथ पाएको छैन् ।
के हो बायो सेक्योर माहोल ?
बायो सेक्योर माहोल त्यस्तो अबस्था हो जहाँ बाहिरी दुनियाँ बाट पूर्ण रुपमा अलग गरिन्छ । अर्थात आईपीएलमा संग्लग्न खेलाडी, सपोर्ट स्टाफ, म्याच अफिसियल, होटल स्टाफ र कोरोना टेस्ट गर्ने मेडिकल टिमका सदस्यसम्मलाई बाहिर निस्कन अनुमति हुँदैन ।
कुनै पनि ब्यक्तिलाई बाहिरी व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने अधिकार हुँदैन । बायो सेक्योर नियम तोड्नेलाई आईपीएलको प्रतियोगिता नियमावली अनुसार सजाय हुन व्यवस्था छ । खेलाडीलाई केहि खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेसम्मको नियम छ ।
त्यस्तै आइपीएलको इतिहासमै पहिलोपटक खेलाडीहरुले खाली रंगशालामा खेलेका छन् । रंगशालामा समर्थकमात्र होइन रमाइलोका लागि राख्ने गरिएका चियरलिडर्स पनि छैनन् । तर, फ्रेन्चाइज टिमले टिभी स्क्रिनमा चियरलिडर्स र समर्थकको रेकर्डेट भिडियो प्रशारण गर्ने प्रबन्ध भने मिलाइएको छ ।
त्यस्तै कोरोनाकै कारण पहिलो खेलमा टसपछि दुवै टोलीका कप्तानले हात समेत मिलाएनन् । कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आईसीसीले क्रिकेट बल चम्काउनका लागि थुकको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएको नियम पहिलो पटक आईपीएलमा लागू भयो ।
खेलका दौरान बलरले थुकको प्रयोग गरेमा हरेक टिमलाई दुईपल्ट चेतावनी दिइनेछ । तर, तेस्रो पल्ट पनि प्रयोग गरेमा जरीवानास्वरुप विपक्षी टिमलाई ५ अतिरिक्त रन दिने नियम बनाइएको छ ।
त्यस्तै आयोजक भारतीय क्रिकेट बोर्डले जारी सिजनमा अनलिमिटेड कोरोना सब्स्टिच्युडका लागि अनुमति दिएको छ । अर्थात प्रतियोगिताको बीचमा कुनै खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण देखिएमा टोलीले अर्को खेलाडीलाई टिममा समावेश गर्न सक्ने बताइएको छ ।
नियमका अनुसार ब्याट्सम्यानको स्थानमा ब्याट्सम्यान र बलरको स्थानमा बलर नै सब्स्टिच्युड हुन पाउने नियम बनाइएको छ । यसबाहेक थुपै्र बदलाव यसपटकको जारी सिजनमा देख्न सकिन्छ । तर, टेलिभिजनको स्क्रिनमा हरेर रमाउने दर्शकहरुले भने उत्साहपूर्ण रुपमा आइपीएलको मज्जा लिइरहेका छन् ।
बलात्कार लुकाउन मिलापत्र गराएको आरोपमा ६ जना पक्राउ
राशिफल : वि.सं.२०७७ साल कार्तिक २७ गते । बिहीबार ।
मुटुको शल्यक्रियापछि कपिल देवको अवस्था स्थिर
विपन्न परिवार भन्छन् , ‘दशैँ हाेइन दशा आयाे’
सस्मरण : आहा ! त्याे दशैँ
राष्ट्रिय जनगणना : यसपटक ‘ई–सेन्सस’समेत गरिने
नक्कली इन्स्पेक्टर बनेर ठगीधन्दा, सहयोगीसहित घटनास्थलबाटै समातिए
पथप्रदर्शक नै बाटोविहीन
जसको हातबाट थुतेर स्कुटर जलाइयो
किशोर–किशोरी लक्षित ‘आर्ट इज पावर’ कार्यक्रम
सन्तानलाई नहप्काई हुर्काउन सकिन्छ
दशैंमा यसरी बनाउनुहोस् मांशाहारी र शाकाहारी स्वादिष्ट परिकारहरू
दशैं विदामा बालबालिकाहरुका लागि तपाईंले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
अर्को वर्षको जुन महिनासम्ममा कोरोना विरुद्धको खोप बजारमा ल्याउने भारतीय कम्पनीको दाबी
मासु र दुई जिब्रे मनोविज्ञान
The Leader Of Nepal - यो राष्ट्रको सेवक
Powered by " Naya Nepal Media Pvt. Ltd. "
Reg No : In Progress..
Aaditya Nepal : 9810040243
© 2020 Naya Nepal Media Pvt. Ltd. All Right Reserved